हरियो कार्पेट झै विछ्याइएको चियाको बुट्यानले इलाममा स्वागत गर्दा (भिडियो) « News24 : Premium News Channel
हरियो कार्पेट झै विछ्याइएको चियाको बुट्यानले इलाममा स्वागत गर्दा (भिडियो)
१. हरियो कार्पेट झै विछ्याइएको चियाको बुट्यानले इलाममा स्वागत गर्दा
हरियो कार्पेट विछ्याए झै चियाको लोभलाग्दो वुट्यानले स्वागत गर्छ , बाह«ै मास हरियालीले आँखालाई आनन्द दिदा चिसो मौसम सबैका लागि हितकारी बन्छ । प्रकृतिले दिएको अमूल्य बरदान मानिन्छ् पूर्वको हरियाली शहर इलामलाई । हरित नगरकोरुपमा आफुलाई चिनाउँदै आएको इलाम अहिले पर्यटकको रोजाईको गन्तव्य बन्न थालेको छ ।
आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटकहरुको रोजाईमा परेपछि इलाममा हरेक मौसममा चहलपहल बढ्न थालेको छ । तर पर्यटकको बसाई लम्ब्याउने शैलीहरु विकास हुन नसक्दा पर्यटक बढे पनि इलामले त्यति फाइदा भने लिन सकेको छैन । अब इलामले यता भने सोच्नु पर्ने अवस्था आएको छ ।
२. शहीदकै अपमान हुने गरी अलपत्र पारियो ओखलढुंगामा निर्माणाधीन शहीद पार्क
३२ रोपनी जग्गा छुट्याएर काम थालियो शहीदका नाममा । १५ लाख खर्चेर ९ सय ९९ सय खुड्किला पनि तयार गरियो । तर २० बर्षदेखि अलपत्र छ ओखलढुंगाको थामडाँडामा निर्माण थालिएको शहीद पार्क । शहीदहरुकै अपमान हुने गरी सबै क्षेत्र उदासिन बनेपछि निर्माणाधीन शहीद पार्क अलपत्र बनेको हो ।
मुलुकमा द्धन्द्ध सुरु भएपछि शान्ति सुरक्षाको कारणलाई देखाएर अलपत्र पारिएको शहीद पार्कप्रति सिद्धिचरण नगरपालिकाले चासो देखाएपनि हात भने हालिसकेको छैन । पहिला शान्ति सुरक्षा र पछि बजेट अभाव देखाएर अलपत्र पारिएको पार्क निर्माणमा पुनः सक्रियता देखाइए शहीदहरुप्रति नै सच्चा सम्मान हुने थियो ।
३. अब पर्यटकको केन्द्र बन्दै अदभूत र आश्चर्यमय भोजपुरको चुलाचुली गुफा
नेपालका बिभिन्न जिल्लामा मानव निर्मित र प्रकृतिद्धारा नै निर्मित अदभूत स्थलहरु धेरै छन् । देख्दा पनि आश्चर्य लाग्ने यस्ता स्थलहरुको संरक्षण भने हुन सकिरहेको छैन । यस्तै मध्येको एक हो भोजपुरको दलगाउँको दिनेनीमा रहेको अदभूत चुलाचुली गुफा । गुफा भित्र आराध्यदेव महादेवको मूर्तीदेखि बिभिन्न देवी देवताको आकृतिहरु रहेका छन् ।
देख्दा अचम्म लाग्ने यो गुफाको विशेषताबारे भने प्रचार प्रसार हुन सकेको छैन । जस्ले गर्दा यो गुफा ओझेलमा परेको छ । तर रामप्रसाद राई गाउँपालिकाको भने गुफातिर ध्यान तानिएको छ । गाउँपालिकाले यस्को संरक्षण गर्दै पर्यटक भित्र्याएर गुफालाई आयआर्जनको स्रोत बनाउने उपाय अवलम्बन गरेको छ ।
कतारबाट फर्कनेको सूची सार्वजनिक, पहिलाे चरणमा ४ उडान हुने
access_time 7:05 am
काठमाडौँ, असार १ । कतारको दोहास्थित नेपाली दूतावासले कतारमा समस्यामा परेर तत्काल स्वदेश फर्किनुपर्ने नेपालीको